» स्लिम हुन छाेड्नु पर्दैन भात !
स्लिम हुन छाेड्नु पर्दैन भात !
९ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:०७
आफ्नो मोटो शरीरलाई फिट बनाउने चाहना कसको पो नहोला र ? हुन पनि हामीमध्ये धेरैले आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउने चाहनामा भात खान छोडिरहेका पनि हुनसक्छौँ । एशियाली देशमा त झन् यो क्रम बढी हुन्छ । किनकि एशियामा सेतो चामलको भात खाने परम्परा छ ।